2 Cheats oo leh Microstation: Dayactir Faylasha Dhibaatooyinka iyo Dhibaatooyinka DWG 3D - Geofumadas
2 tricks la Microstation: Repair waxyeello files iyo dhibaatooyinka la billabo 3D
Luulyo, 2017 Microstation-Bentley
Dhibaatada 1. Faylka DGW 3D wuxuu u furan yahay sidii ay ahayd kaliya cabbirka 2
Waa wax aad u badan, in marka la furo faylka 3D ee qaabka DWG, oo leh Microstation, waxay u furantaa sidii oo kaliya xaddiga 2.
Tani waxay dhacdaa sababta oo ah Microstation sida caadiga ah ayaa ku habboon doorashooyinkeeda, in faylka abuurka ah (abuur), oo u dhiganta shaashadda AutoCAD, ayaa la saadaalinayaa waa cabbirka 2.
Xalku waa mid sahlan,
Iyada oo taxane fudud ee tallaabooyinka aad mar walba awood u yeelan doontaa inaad furto faylashaada kordhinta DWG sida aad jeceshahay
Ku dhaji MicroStation waxaadna heleysaa sanduuqa mashiinka MicroStation (Maamulaha). Ku dhaji feylka oo dooro (adiga oo aan furin).
Hadda waxaad riixdaa badhanka [Options] ee hoose ee sanduuqa miiska ee MicroStation.
Iska ilaali sanduuqa jeegaree "Create Model 2D for Space Model" oo riix 'OK'.
Hadda ka fur feylkaaga DWG ka soo MicroStation Administrator.
Xigga 2. Dayactir faylka MicroStation
Dhibaatooyinka keeni kara burbur ku jira MicroStation ama ka hortagaan faylasha naqshadeynta furitaanka waxay qaadan karaan dhowr shaqo habeen iyo xitaa dhacaan dhowr todobaad dhamaystiran. Qodobada Ghost ama waxyaallaha adag ee la xulan karo (ama guuri, nuqul ama tirtiri), dhibaatooyinka khariidada, isbeddelka dhibaatooyinka soo bandhigaya iyo dhibaatooyinka soo baxa; marar badan ka dib markii ay soo galaan faylasha naqshadeynta ee V7 ilaa V8 ama V8i ama dhoofinta u dhaxaysa faylasha DXF / DWG.
Sida ay u dhacdo
Sanduuqa "Daabacaadda Dhibaatada MicroStation" ayaa muuqata markaad ka shaqeyneysid faylka naqshadeynta.
Waxay leedahay faylasha naqshad leh oo u dhaqmeysa si qarsoodi ah marka la dhejinayo ama la dhejiyo.
Fiiro sanduuqa wada-sheekeysiga oo muujinaya in MicroStation ay la kulantay dhibaato iyo in la xiro.
Ku dhaji "amarrada oo dhan" ee faylka naqshadeynta iyo sawirada oo dhan waxay noqoneysaa dhib yar oo ku yaala shaashadda.
Waxa uu ogaadaa in qaar ka mid ah xubno ka mid ah ay waayeen wax qarsoodi ah.
Raadi waxyaabo ay adagtahay in la doorto ama laga saaro.
Waxay leedahay faylasha naqshadeynta oo aanad furi karin.
Baro heerarka u muuqda in ay ka lumeen Maamulaha Heerka.
Faahfaahin buuxa ayaa ka baxsan faylka naqshadeynta ee laga sameeyay V8 ama maktabada unugyada.
Waxaad la kulantaa dhibaatada inaad sawirto ama aad udhaqaajiso faylasha naqshadaynta qaarkood mashruuc.
Ugu danbeyn, wax ka badan maahan faylka musuqmaasuqa.
Ku hagaajin FileFixer
FileFixer waa mid ka mid ah alaabada lagu ciyaaro ee runtii ku faraxsan, oo leh sifooyin loogu talagalay hagaajinta nooc kasta oo musuqmaasuq ah ama xaalad aan fiicnayn oo laga heli karo faylasha naqshadaynta MicroStation. FileFixer waxay ka hortagtaa "astaamaha" kor ku xusan. Mashruuc lacageed badan oo saacado ah iyo ballanqaadyo, waxaa hubaal ah in ay ku habboon tahay soo dejinta.
Si aad u ogaato sida loo helo nuqulka FileFixer ee Microstation V8 ama Microstation V8i, ku qor xogtaada iyo qof ayaa kula soo xiriiraya.
[xiriirka-foomka-7 id = »20743 ″ cinwaanka =» ContacAxiom »]
Post Previous«Previous ... oo soo urursadeen geobloggers halkan ...
Post Next Lagacna aad: 5 wax wanaagsan ee aad sameyn kartaa software CAD ahNext »